Abenzi beMagnet yokuLoba ngaMacala amabini kunye nabathengisi | Horizon
Ngokusekwe kwimathiriyeli yayo kunye nokusebenza, imagnethi esecaleni iphinda ibizwa ngokuba ngamacala amabini e-Neodymium salvage yokuloba ukuzingela ubuncwane. Yinkqubo yemagneti entsha eyenziwe kumazibuthe omhlaba onqabileyo anamandla eNeodymium, ityala lesinyithi kunye neebholithi zamehlo ezingafunekiyo. Uyilo oluyingqayizivele lwenza umazibuthe omncinci wamacala amabini okuloba ukuvelisa amandla amakhulu ukuba abe nesicelo esibanzi njengokuloba umazibuthe, ukuxhoma, ukuphakamisa kunye nokufumana amanqaku ahlukeneyo aneentsimbi.
Iimpawu zoMazibuthe waMacala amabini
1.I-eyebolt yensimbi engenakunqamka eguqukayo: Olu luyilo lwenza ukuba abasebenzisi basebenzise amagwegwe abo okhethekileyo endaweni yokuhlangabezana nesicelo sabo esikhethekileyo.
2. Ukuqinisa okuphezulu phakathi kwe-eyebolt kunye nemagnethi yokuloba: Umsesane wokugcina unciphisa umngcipheko wokuxhaswa ngamehlo kunye nokuphulukana nemagnethi yokuloba.
3. Amacala atsala kabini: Olu luyilo luyiphinda kabini le ndawo ngamandla ombane, eya kwenza ubungakanani obulinganayo obunamacala amabini okuloba bandise amathuba okuzingela ubuncwane ngempumelelo
Uvelisa njani uMazibuthe oMacala mabini
I-R & D kunye nokulinganisa: Ngokweemfuno zabathengi ezinzima, kufuneka singene kwi-R & D kunye nenkqubo yokulinganisa, ukufumana iimfuno ezineemagnethi kubandakanya izinto zemagnethi, imilo, ubungakanani, ukutyabeka kunye nenqanaba, izinto zecala lesinyithi kunye nobukhulu obufanayo, indlela yokudibanisa izinto, njl. Kwaye emva koko isampulu iyimfuneko ukugqibezela uyilo.
2. Imagnet yeNeodymium yokuThengisa: Ngexesha lenkqubo yemagnethi yebhloko, ubume bemagnethi kunye netekhnoloji yemveliso kufuneka ilawulwe ngokungqongqo, ethi iphantse ithathe isigqibo ngokubamba kunye nomgangatho wemagnethi yokuloba esecaleni. Ngamanye amaxesha, inqanaba lomazibuthe kufuneka libe ngaphezulu kunebanga elisezantsi njenge-N35, ukuze ufikelele kumandla aphezulu afunekayo kunye nobukhulu obuncinci.
3. Ukukhetha izinto zentsimbi kunye nemeko yentsimbi machining: Izinto zetyala lesinyithi zikwabalulekile ukuba nefuthe kumandla okutsala, kuba ityala lesinyithi kufuneka lincede amandla kazibuthe womhlaba onqabileyo u-NdFeB umazibuthe ugxile kwiziko kuphela. Ngapha koko, ityala lensimbi linokukhusela umazibuthe osisigxina we-NdFeB ekuqhekekeni nasekuqhekekeni. Izinto zecala yintsimbi yekhabhoni ephantsi.
4. Ukuzalisa i-epoxy emnyama: Isikhewu phakathi komazibuthe we-NdFeB kunye netyala lesinyithi ligcwele i-epoxy emnyama, enokulungisa umazibuthe weNeodymium kwityala lesinyithi ngokuqinileyo, emva koko ukhusele i-disc yeNeodymium magnethi ukuba iwe phantsi emva koko wandise ixesha layo lenkonzo.
1.Umgangatho ophezulu: umazibuthe we-NdFeB, elona candelo libaluleke kakhulu liveliswa ngumzi-mveliso wethu, osenza sikwazi ukwenza umgangatho womazibuthe phantsi kolawulo.
2. Ixabiso elisebenzayo: Imveliso yangaphakathi endlwini isenza ukuba sikwazi ukuqinisekisa umazibuthe wethu wokuloba ngomgangatho ofanayo kodwa ngexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa nabakhuphisana nabo.
3. Ukuhanjiswa okukhawulezayo: Iimveliso ezininzi ezigqityiweyo ezisemgangathweni kwisitokhwe kunye nokuxhotyiswa ngaphakathi endlwini kwenza unikezelo lwexesha elifanelekileyo kwimagnethi yokuloba.
4. Ukhetho oluninzi: Iinketho ezingakumbi ziyafumaneka. Ngapha koko, ukuveliswa kwangaphakathi endlwini kunye nokuqamba kwenza ukuba ukhetho olwenziweyo lweenkqubo zemagnethi kubathengi zikulungele. Singadibana nokuthenga okulula okukodwa.
Idatha yobuGcisa boMazibuthe aMacala mabini
Inombolo yendawo D H M Nyanzela Ukusinda okushiyekile Ubushushu obukhulu bokuSebenza
mm mm mm ikg iilbs g ° C ° F
I-HM-S1-48 48 18 8 80 176 275 80 176
I-HM-S1-60 60 22 8 120 264 500 80 176
I-HM-S1-67 67 25 10 150 330 730 80 176
I-HM-S1-94 94 28 10 300 660 1540 80 176
I-HM-S1-116 116 32 12 400 880 2650 80 176
I-HM-S1-136 136 34 12 600 1320 3850 80 176
Egqithileyo Umtsalane weSitayile seNeodymium
Okulandelayo: Imagnethi yokuLoba emacaleni enye